मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाऊ : डा. केसी – Health Post Nepal
मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाऊ : डा. केसी
२०७६ मंसिर ९ गते १७:४१
चिकित्साशिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई अटेरी गरेर अवैध असुलेको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले कलेज सञ्चालकलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटकका लागि दिएको समयसीमा सकिएलगत्तै सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले ठगीकर्ता सञ्चालकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन माग गरेका हुन् ।
देशभर अवैध शुल्क फिर्ताका लागि विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहँदा डा. केसीले सञ्चालकहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन र उनीहरूद्वारा सञ्चालनरत मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया थाल्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
पटक–पटकको सत्याग्रहको बलमा गठित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चिकित्साशिक्षाका लागि शुल्क निर्धारण गरेकोमा त्यसको अवज्ञा गर्दै कलेजहरूले लाखौँ बढी अवैध शुल्क लिई विद्यार्थीलाई शोषण गरिरहँदा सरकारले देखाएको लाचारीप्रति डा. केसीले कटाक्ष गरेका छन् ।
आफूमाथि भएको अर्बौंको शोषणविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाइरहेका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालकले गरेको ज्यादतीको डा. केसीले घोर निन्दा गरेका छन् । पटक–पटकको सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने ठगीकर्तालाई कारबाही नगर्नुले सरकारकै संरक्षणमा ठगीतन्त्र चलिरहेको पुष्टि हुने डा. केसीले बताएका
मेडिकल कलेजहरूले ३ वर्षको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी विद्यार्थीबाट ठगी गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । ठगी गर्नेमा निजी मेडिकल कलेज मात्र नभएर आइओएमको सम्बन्धनमा सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज (सार्वजनिक मेडिकल कलेज) ले समेत रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । देशभरका मेडिकल विद्यार्थीले महिनौँदेखि पठन–पाठन ठप्प पारेर अवैध शुल्क फिर्ताका लागि आन्दोलन गरिहेका छन् । सेनाको घेराभित्रका विद्यार्थीले समेत सेनाप्रमुखलाई खुला पत्र लेखेरै अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलन चलाउने हिम्मत देखाइरहेका छन् ।
विद्यार्थीको माग यत्ति छ, सरकारले दिएको निर्देशन पालना होस् । यद्यपि, सरकारले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनै पहल गरेको अवस्था छैन । शोषित, पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावकको निरन्तरको आवाज र सत्याग्रहीको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकार आफ्नै निर्णय र निर्देशनको बचाउका समेत अग्रसर नहुनुले मेडिकल माफियाको जालो कतिसम्म मजबुत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि, जुन तहसम्म फैलिएको भए पनि, जोसुकैको संरक्षणमा ताते गरिरहे पनि असत्यको पहाड एकदिन त अवश्य ढल्नु नै छ, समाजले सयौँ डा. केसीहरू जो जन्माउँदै छ ।
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । दुरदराजका विपन्नसमेत सबै नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने तथा योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढ्न पाउने अधिकार स्थापना गर्नु हाम्रो मुख्य ध्येय रहिआएको छ । यसै क्रममा हाम्रो निकै लामो संघर्षपछि माथेमा कार्यदलको प्रतिवदेनमार्फत चिकित्सा शिक्षामा शुल्क तोक्ने व्यवस्था भएको थियो । त्यसयता लगातार सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौं । तर, सरकारले आफैंले तोकेको शुल्क कायम गर्नु त कता, माफिया र अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । फलस्वरुप शुल्कमा दशौं अर्बको कालोबजारी गर्नेहरु दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत हुँदै गइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय हाम्रो सत्याग्रह तथा विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण सरकारले अवैध रुपमा असुलिएको रकम फिर्ता गर्न बारम्बार मेडिकल कलेजहरुसित अनुनयविनय गरे पनि तिनका सञ्चालकहरुले सुनुवाइ गरेका छैनन् । सरकारचाहिं यति नालायक र लाचार भएको छ कि शुल्क फिर्ता गर्ने समयसीमा पटक-पटक बढाउनेबाहेक केही गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सार्वजनिक रुपमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने भने पनि ठगहरुका नाइके उनकै पार्टीका नेता तथा हितैषी भएका कारण केही गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको संरक्षणप्राप्त अपराधीहरुले शुल्क फिर्ता नगर्ने मात्र हैन, विद्यार्थीलाई अमानवीय यातना र धम्की दिइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो दोहोरो भुमिका तत्काल बन्द गरी त्रिवि र केयुअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजले हाल अध्ययनरत सबै विद्यार्थीसँग लिएका अवैध शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दर्छौं । साथै, सरकारले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिंदा पनि शुल्क फिर्ता नभएकाले तत्काल ठगी गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउन तथा मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया शुरु गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।
स्मरण रहोस्, हामीले सत्याग्रहको पछिल्लो चरण स्थगन मात्रै गरेका हौं । तत्काल विद्यार्थीहरुसँग अवैध रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने लगायतका हाम्रा माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौं ।